NamasteNEPALI.com: तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? यी ६ गल्ती नगर्नुस् ।
तौल घटाउन चाहनुहुन्छ ? यी ६ गल्ती नगर्नुस् ।
जीउको वजन बढेर हैरान हुनुभएको छ अनि तौल घटाउनका लागि डाइटिंग तथा पर्याप्त व्यायाम पनि गर्नुभएको होला । तर यति गर्दापनि तपाइँको वजन घट्नुपर्ने जति घटिरहेको छैन । यदि यस्तो समस्याबाट गुजि्ररहनुभएको छ भने सचेत हुनुहोस् । किनकी यसका विभिन्न कारण हुनसक्छन् । वजन नियन्त्रण हुन नदिने मु्ख्य ६ कारण यस्ता छन्:
पर्याप्त निद्रा नलिनु: निद्रा पूरा हुन पाएन वा पर्याप्त मात्रामा सुतिएन भने सरीरमा भोक जगाउने हर्मोन सक्रिय हुन्छ अनि हामीलाई भोक लाग्दछ । भोक लागेपछि स्वभाविक रुपमा खानेकुरा खाइन्छ । अर्थात् आवश्यकता भन्दा बढि वा कु समयमा पनि खानेकुरा खान थालेपछि मोटोपना बढ्नु स्वभाविक हुन्छ ।
नास्ता नखानु: बिहान ब्रेकफाष्ट नगर्नाले सरीरको उर्जा दहन अर्थात् मेटाबोलिज्मको दर कम हुन्छ र जिउमा बोसो जम्मा हुन थाल्दछ । त्यसपछि हामीलाई बढि भोक लाग्न थाल्दछ अनि खाना खानेबेला आवश्यकता भन्दा धेरै एकैचोटी खाइन्छ । यसरी खानाले मोटोपना घट्नुको साटो झनै बढ्दछ ।
पानी कम पिउनु: पानीले जिउको फ्याटलाई उर्जामा बदलिदिन्छ । खाना खानुभन्दा पहिले पर्याप्त पानी पिनाले भोक कम लाग्दछ । तर पानी कम पिउनाले बोसो उपयोग हुन पाउँदैन र उर्जाको कमी हुँदा हामीलाई भोक लाग्दछ अनि धेरै खाइन्छ ।
सफ्टडि्रंक: यस्ता पेय पदार्थमा बढि मात्रामा चिनी हुन्छ । जसका कारण सरीरमा बढि क्यालोरी आपूर्ति हुन्छ र मोटोपना बढ्नमा सहयोग गर्दछ ।
अनावश्यक औषधि: जिउमा रोग लागेपछि निको पार्न त औषधि अनिवार्य रुपमा खानै पर्यो । तर अनावश्यक रुपमा औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन । डिप्रेसन, तनाव, माइग्रेन, उच्च रक्तचापमा खाइने औषधिले जिउको मोटोपना पनि बढाउँदछ ।
भोजनमा पर्याप्त प्रोटिन समावेश नगर्नु: उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुरा भोजनमा समावेश नगर्नाले बारम्बार गुलियो खानेकुरा खाने इच्छा जाग्दछ । धेरै गुलियो खानो जिउको वजन बढ्दछ ।
Labels: HEALTH, MAIN, USEFUL